बुवाले मूलधारमा ल्याए पनि हामी मान्दैनौँ: विप्लवका छोरा प्रकाश चन्द - BBC News नेपाली
बुवाले मूलधारमा ल्याए पनि हामी मान्दैनौँ: विप्लवका छोरा प्रकाश चन्द
केही समययता 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विभिन्न हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उक्त समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
सो पार्टीका अधिकांश नेता पछिल्लो समय लगभग भूमिगत छन्।
उक्त पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका छोरा प्रकाश चन्द भने अहिले चितवनको एक चिकित्साशास्त्र कलेजमा एमबीबीएसको पढाइ पूरा गर्ने क्रममा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको रूपमा काम गरिरहेका छन्।
विस्फोटका घटनामा सुरक्षा कमजोरी कि चुनौतीको कम आकलन
प्रकाश चन्द सो पार्टीको स्वास्थ्य सङ्गठनको केन्द्रीय महासचिव पनि रहेका छन्।
उनलाई चाहिँ उनको बुवाको नेतृत्वमा रहेको सङ्गठनले गरेका गतिविधि कस्तो लाग्दैछ? उनीसँग यसै साता हाम्रा चितवनस्थित सम्वाददाता ईश्वर जोशीले कुरा गरेका थिए।
प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानी सङ्क्षेपमा।
तपाईँले डाक्टरी किन पढ्नुभएको?
यो धेरै पुरानो र पहिलेका कुरासँग जोडिएको छ। बाल्यकालसँग पनि जोडिएको छ।
१० वर्षे द्वन्द्वकालमा देखेको चित्र र म आफैँले भोगेको पीडा पनि छ। त्यो बेलामा रोल्पामा हजारौँ कमरेडहरूले आफ्नै आँखा अगाडि दिएको बलिदान र क्रान्तिले त्यतिखेर भोग्नु परेको क्षति- यिनै विषयले मलाई कता कता प्रोत्साहन पनि दियो र पढ्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यतिखेर नै लागेको थियो।
हामीले ठूलो क्षति बेहोरेका थियौँ। त्यतिखेर युद्धमा लाग्ने जनमुक्ति सेनालाई स्वास्थ्य उपचारको सामान्य भन्दा सामान्य विषय नजान्दा धेरै क्षति भएको थियो। त्यसलाई कहीँ न कहीँ हल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मलाई लाग्थ्यो र मैले बुवासँग पनि छलफल गरिराख्थेँ। त्यही सिलसिलामा कता कता बाट मिलेर आयो र डाक्टरी पढियो।
यसमा धेरै ठूलो इच्छा र आकाङ्क्षा केही पनि छैन।
यसमा मेरा दुईवटा योजना छन्। ९५ प्रतिशत के छ भने मेरो तन मन सबै अब नेपालको एकीकृत जनक्रान्तिमा छ। हामीहरूले कसरी हुन्छ मैदानमा नेतृत्व गर्ने गरी जोस र जाँगरसहित अगाडि आउनुपर्छ र पहिलाको हाम्रो जुन क्षति थियो त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने नै उद्देश्य अहिले छ।
कुनै कारणले त्यो भएन भने एउटा व्यावसायिक जीवनमा फर्कनुपर्ने पनि हुन सक्छ। यही दुईवटा कुराको सेरोफेरोमा नै रहेर अगाडि बढ्छु।
व्यक्तिगत र भावनात्मक हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँ जहाँ भए पनि सुरक्षित हुनूस् र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नूस् भन्ने भइहाल्यो।
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने अहिले उठाएको क्रान्तिको जुन लाइन छ त्यसलाई छाड्नु हुँदैन। हिजो १० वर्षको जुन पीडा भोगेका छौँ त्यसलाई भुलाउनेगरी, विजयको झण्डा लहराउनेगरी अनि हजारौँ शहीदहरूको सपना पूरा गर्ने गरी क्रान्तिको मार्गदर्शन नछाड्नूस् भन्ने हो।
जस्तो किसिमको बलिदानी दिन पनि हामी तयार छौँ।
अहिले यो प्रश्न त्यति जायज भएन। अहिले जुन परिवेश र हिसाबले राजनीति अगाडि बढिरहेको छ, यो बेला यो प्रश्न त्यति सुहाउँदैन।
मैले तपाईँलाई हुन्छ भनेँ भने त्यो उत्तर पनि सही नहुन सक्छ, र हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन।
बुवाले तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ, अथवा यो गर त्यो नगर भन्ने के सुझाव दिने गर्नुहुन्छ?
बुवा छोराको सम्बन्ध भइसकेपछि बुवाले छोरालाई गर्ने मार्गनिर्देशन सधैँभरि गरिरहेको हुन्छ।
व्यक्तिगत रूपमा यो नगर त्यो नगर भन्नुभन्दा पनि आन्दोलन र सङ्घर्षसँग सम्बन्धित योजना र अरू कार्यक्रमहरूको विषयमा बढी छलफल हुन्छ।
तपाईँजस्ता मान्छेलाई अब तपाईँको बुवाको आह्वानमा मार्न र मर्न पनि हिचकिचाउन नहुने स्थिति आइपर्न सक्छ। तपाईँ मान्छे बचाउने पेशामा लाग्ने तरखरमा हुनुहुन्छ। कुरा नमिलेजस्तो लाग्दैन?
कुनै पनि पेशा राम्रो वा नराम्रो भन्नु भन्दा त्यो पेशालाई तपाईँले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ र कसरी आफ्नो जीवनमा ढाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो।
मैले कहिले पनि मान्छे मार्नुपर्छ वा हाम्रो पार्टीको महासचिवले पनि त्यसो गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि गरेको छैन।
डाक्टरले मान्छे बचाउनु‍पर्छ मात्र भन्नुभन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिमा डाक्टरले के गर्दा चाहिँ राष्ट्रमा शान्ति कायम हुन्छ वा कसरी समृद्ध हुन्छ अनि पूँजीवादी दलाल व्यवस्थाबाट तपाईँ हामी कसरी स्वतन्त्र हुन्छौँ, अन्तराष्ट्रिय शक्तिबाट हामी कसरी स्वतन्त्र हुन्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड बल भएको कारण हाम्रो ध्यान त्यता हुने भइहाल्यो।
कसैले सङ्घर्षमा दुस्मनलाई प्रतिवाद गर्दै जाँदा भवितव्यले केही घटना पनि हुन सक्छ। त्यसबाट हामी जोगिने जोगाउने कुरा भइहाल्यो तर मर्न नै पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पनि छैन। पेशाको हिसाबले पनि मान्छे बचाउनुपर्छ भन्दै गर्दा म त्यहाँ पनि मान्छे बचाउन नै जाने हो। मेरो बाल्यकालदेखिको सपना पनि त्यही हो।
अबका क्रान्तिहरूमा मैले प्रत्यक्ष भाग लिन पाइयोस् र कोही पनि त्यस्ता स्वतन्त्रता सेनानीहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने मेरो भित्री आत्मादेखिको चाहना हो।
आलोचना गर्नका लागि गरिने विषयहरूमा हाम्रो भन्नु केही छैन।
तर हाम्रो बाल्यकाल हेर्नूस् - हामी कस्तो खालको भोगाइबाट गुज्रिएका छौँ र कस्तो खालको शिक्षादिक्षाबाट अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा सबै युवाले बुझ्न जरूरी छ।
मेरो बाल्यकालको कुरा गर्ने हो भने रोल्पाको बमबारी र बारुदभित्र गुजारेका ती रातहरू, आँखै अगाडि रक्ताम्मे भएर ढल्दै गरेका लाशहरू अनि मेरै बुवाको मरेको भन्ने चिठ्ठी पढ्दाताकाका मेरा भावनाका कुराहरू, यी सबै कुरा जोडिएर आउँछन्।
यहाँ कसैले बुर्जुवा शिक्षा पढ् वा नपढ् भन्ने भन्दा पनि शिक्षा लिने कुरामा बुर्जुवा होस् वा जे होस् लिने कुरा ठूलो हो त्यसैले अहिले शिक्षा लिने मौका छ लिनुपर्छ भन्ने हो।
अहिले जुन विषय आएका छन् आफ्ना छोराछोरी पढाउने अरूको छोराछोरी मार्न लगाउने भन्ने - खास विषय त्यो होइन। हामी पनि वा म पनि क्रान्तिको मैदानमा हुनेछु।
आज म एमबीबीएस पढ्दै छु। भोलि वातावरण बिग्रदै गएको अवस्थामा म तुरुन्तै हिँड्न तयार छु। क्रान्तिको लागि कसले कहाँबाट बलिदानी दिने भन्ने कुरा हो। त्यसका लागि हामी सधैँ तयार छौँ।
यही धारमा यही अवस्थामा मूलधारमा आउनु हुँदैन। विप्लवले मूलधारमा ल्याए पनि हामी मान्दैनौँ त्यो कुरा। पारिवारिक हिसाबले मेरो बुवा भए पनि यो तीन करोड नेपाली जनताको मुक्ति कि मृत्यु भन्ने विषय बनिसक्यो।
तपाईँजस्तो डाक्टर पढ्न ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। तपाईँको खर्च कहाँबाट जुट्छ?
यसमा धेरै साथीहरूको पनि सहयोग रहेको छ। सीएमसी कलेजले हाम्रो अनुरोधमा धेरै खर्च लिएको छैन। हाम्रो परिवार डाक्टरी पढ्नै नसक्ने, मोटरसाईकल चढेर हिँड्न नसक्ने, राम्रो लुगा लगाउनै नसक्ने खालको परिवार पनि होइन।
हामी ठकुरी खानदान भएको हिसाबले पनि लाहुरे परिवारको पृष्ठभूमि छ। त्यसकारणले गर्दा डाक्टरी पढ्नै नसक्ने विषय होइन। हाम्रो परिवारको जुन स्थिति छ त्यो भन्दा निकै तल गएर हामीले हाम्रो बालापन बिताएका छौँ।
तपाईँ महँगो मोटर साईकलमा चढ्नुहुन्छ भनेर आलोचना हुने गरेको छ। आम्दानीको स्रोत के हो?
त्यो विषय कहाँबाट आयो भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी हुन्छ। जुन 'हार्ले डेभिडसन' मोटर साईकलको कुरा हो, काठमाण्डूमा सामान्य पार्किङ्ग गरी राखेको अवस्थामा मैले चढेर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हालेको थिएँ। त्यो आजको कुरा पनि होइन, करिब २/३ वर्ष अगाडिको कुरा हो।
केही मिडिया र केही सामाजिक सञ्जालका समूहहरूले यसलाई ठूलो विषय बनाएर, मसला हालेर, रङ्गरोगन गरेर अगाडि ल्याएपछि आलोचना त हुने नै भयो। त्यो (मोटर साईकल) मेरो पनि होइन।
वर्तमान राजनितिक परिवेशलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो राजनीति धेरै टिक्नेवाला छैन। हामी माथि जुन हिसाबले प्रतिबन्ध लगाउने, युद्ध थोपर्ने र अनावश्यक रूपमा उत्तेजित गर्ने प्रपञ्च भइराखेका छन्, उनीहरूले खनेको खाल्डोमा उनीहरू नै पर्नेछन्।